Sida loo doorto magacyada duufaannada, duufaannada iyo ifafaalaha kale ee saadaasha hawada | Saadaasha Shabakadda
Sidee duufaannada, duufaannada, iyo ifafaaleyaasha kale ee saadaasha hawada loo magacaabay
Sergio Gallego | | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Daawashada wararka tvga ama ku akhrinaya joornaalka, hubaal waxaad la yaabtay wax ka badan hal jeer sababta duufaan ama duufaan Waxay leedahay magac gaar ah oo maxay tahay nidaamka la raaco si loo doorto. Markaas waan kaa nadiifin doonaa dhammaan shakigaaga waxaanan si faahfaahsan u sharxi doonaa sida loo sameeyo waxay doortaan magacyada dhacdooyinka saadaasha hawada.
Magacaabista dhacdooyinka saadaasha hawada ee kala duwan ee adduunka ka dhaca, ayaa bilaabmay dhawr sano ka hor si looga caawiyo muwaadiniinta inay si dhakhso leh u aqoonsadaan ifafaalaha noocaas ah. Sida laga soo xigtay khubarada way fududahay in la xasuusto magaca qofka marka loo eego tiro yar ama eray farsamo ah. Intaas waxaa sii dheer, warbaahintu aad ayey uga sahlantahay markay ka hadlayaan iyaga.
Markii hore, magacyo ayaa laga soo xulay qaab aan macquul ahayn iyo iyada oo aan la raacin wax qaab ah. Laga bilaabo qarnigii XNUMXaad, ifafaalooyin ayaa la bilaabay in lagu aqoonsado magacyada dumarka. Sanado badan, 1979, magacyada ragga ayaa bilaabay in lagu daro. Sannadkii 1980, Ururka Saadaasha Hawada Adduunka iyo Adeegga Saadaasha Hawada ee Mareykanka waxay ku go'aamiyeen heshiis is afgarad ah in lagu beddelo magacyada haweenka iyo ragga ee xilliga magac tornaado ama duufaanno.
Meelaha meeraha ee sida aadka ugu nugul ifafaalooyinka noocan oo kale ah waxay leeyihiin liiska magaca. Waxaa jira 6 liis magacyo ah oo u wareegaya aagga Atlantic iyo kuwa kale ee aagga Baasifigga, sannad kasta mid ka mid ah ayaa la adeegsadaa iyo kadib 6 sano kii ugu horreeyay ayaa mar kale la adeegsadaa. Haddii ay dhacdo duufaan ama duufaan runti wax burburin wuxuuna sababa waxyeelo fara badan iyo mid shaqsiyeed, magaca dib looma isticmaalo sababo xasaasi ah awgood. Tani waa kiiska Duufaanta Katrina, Magaciisana dib dambe looma isticmaali doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Sidee duufaannada, duufaannada, iyo ifafaaleyaasha kale ee saadaasha hawada loo magacaabay
Ana Paola dijo
waa carro caynkee ah?
Ku jawaab ana paola
Cimilada qabow ayaa ka khatar badan cimilada diiran
Magaalooyin ku baaba'aya kuleylka adduunka dartiis